Tendrombohitra Merapi: toetra, endrika ary fipoahana | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 04/01/2022 10:00 | Haibolantany
Ny Tendrombohitra Merapi dia volkano mavitrika hita any Central Java, Indonezia, eo amin'ny 30 kilometatra avaratr'i Yogyakarta, ity tanàna ity dia manana mponina maherin'ny 500.000. Izy io dia voatondro ho iray amin'ireo volkano mavitrika indrindra eran-tany, indrindra fa ao amin'ny faritra miendrika subduction. Ankoatra izany, io no volkano mavitrika indrindra amin'ireo volkano rehetra any Indonezia.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Tendrombohitra Merapi, inona ny toetrany, ny fipoahana ary ny maha-zava-dehibe azy.
2 Fiforonan'ny Tendrombohitra Merapi
3 Ny fipoahan'ny Tendrombohitra Merapi
4 Rash vao haingana
Gunung Merapi, araka ny ahafantarana azy ao amin'ny fireneny, dia sokajiana ho stratovolcano na volkano mitambatra izay niforona tamin'ny lava-drano navoaka nandritra ny an-tapitrisany taona ny rafitra. Ny Global Volcanic Activity Program dia milaza fa 2.968 2.911 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina izy io, na dia lazain'ny United States Geological Survey aza fa 2010 XNUMX metatra ny haavony. Tsy marina ireo fandrefesana ireo, satria hanova azy ireo ny fitohizan'ny asan'ny volkano. Amin'izao fotoana izao dia ambany noho ny fipoahana mahery vaika nitranga talohan'ny taona XNUMX.
Ny hoe “Merapi” dia midika hoe “Tendrombohitra Afo”. Eo akaikin'ny faritra be mponina no misy azy, ary ny hamafin'ny fipoahana dia nahatonga azy ho toerana tao anatin'ny folo taona nisian'ny volkano, ka iray amin'ireo volkano 16 be fianarana indrindra eran-tany. Na dia eo aza ny loza, ny Javanese dia manan-karena amin'ny angano sy ny angano, ankoatra izany, ny hatsaran-tarehiny voajanahary mibaribary dia voaravaka amin'ny fanambanin'ny zavamaniry matevina ary fonenan'ny karazana biby maro.
Fiforonan'ny Tendrombohitra Merapi
Merapi dia ao amin'ny faritra subduction izay milentika ny takelaka Indian-Australian eo ambanin'ny takelaka Sunda (na probe). Ny faritra subduction dia toerana milentika eo ambanin'ny takelaka hafa, ka miteraka horohoron-tany sy/na volkano. Ny akora mandrafitra ny takelaka dia manosika ny magmà hiala ao anatin'ny tany, ka miteraka fanerena mahery vaika, ka manery azy hiakatra ambony hatrany hatrany mandra-piposahan'ny crust ka lasa volkano.
Raha ny fijery ara-jeolojika, ny Merapi no tanora indrindra any atsimon'i Java. Mety ho 400.000 taona lasa izay no nanomboka ny fipoahany ary nanomboka teo dia nampiavaka azy ny fihetsika feno herisetra. Ny lava manjavozavo sy ny akora mivaingana izay noroahina nandritra ny fipoahana volkano dia nivangongo tamin'ny sosona ary nihamafy ny etỳ ambonin'ny tany, ka namorona endrika volkano misy sosona mahazatra. Taorian'ny fisehoany dia nitohy nitombo ny Merapi nandritra ny Pleistocene hatramin'ny 2,000 XNUMX taona lasa izay rehefa nianjera ny tranobe lehibe.
Ny fipoahan'ny Tendrombohitra Merapi
Manana tantara lava be momba ny fipoahana mahery vaika izy io. Nisy fipoahana 68 nanomboka tamin’ny 1548, ary nandritra ny fisiany dia nisy fipoahana 102 voamarina eran-tany. Matetika izy io dia miaina fipoahana mipoaka lehibe miaraka amin'ny fikorianan'ny pyroclastic, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia lasa mipoaka kokoa izy ireo ary miforona dome lava, tsipika miendrika havoana boribory.
Matetika misy maimaika kely isaky ny 2-3 taona ary misy maimaika lehibe isaky ny 10-15 taona. Ny fikorianan'ny pyroclastic misy lavenona, entona, vato ampongabendanitra ary sombin-bato hafa dia mampidi-doza kokoa noho ny lava, satria afaka midina amin'ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 150 kilometatra isan'ora izy ireo ary tonga any amin'ny faritra midadasika, ka miteraka fahasimbana tanteraka na ampahany. Ny olana amin'i Merapi dia ao amin'ny iray amin'ireo faritra be mponina indrindra ao Indonezia izy io, izay misy olona maherin'ny 24 tapitrisa ao anatin'ny radius 100 km.
Ny fipoahana lehibe indrindra dia nitranga tamin'ny 1006, 1786, 1822, 1872, 1930, ary 2010. Nahery vaika tokoa ny fipoahana tamin'ny 1006 ka noheverina fa nitarika ny fiafaran'ny fanjakan'i Mataram, na dia tsy ampy aza ny porofo manamarina izany finoana izany. . . Na izany aza, ny taona 2010 no taona ratsy indrindra tamin'ny taonjato faha-353, izay niantraika tamin'ny olona an'arivony, nanimba zavamaniry hektara ary namono olona XNUMX.
Nanomboka ny volana oktobra ary naharitra hatramin’ny volana desambra ny hetsika. Namokatra horohoron-tany, fipoahana mipoaka (fa tsy iray monja), fihotsahan'ny lava mafana, fihotsahan'ny volkano, fikorianan'ny pyroclastic, rahona lavenon'ny volkano matevina, ary na dia baolina afo aza izay nahatonga olona 350.000 teo ho eo nandositra ny tranony. Tamin'ny farany, lasa iray amin'ireo loza voajanahary lehibe indrindra tao Indonezia izany tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Rash vao haingana
Nipoaka indray ny volkano mavitrika indrindra any Indonezia tamin'ny alatsinainy 16 aogositra 2021, namoaka renirano lava sy rahona entona avy any am-pototry ny tendrombohitra tany amin'ny nosy Java be mponina, izay mirefy 3,5 kilometatra (2 kilaometatra).
Re ny firohondrohon'ny fipoahana volkano kilometatra maromaro avy eo amin'ny Tendrombohitra Merapi, ary ny lavenona volkano nipoaka avy amin'ilay volkano dia manodidina ny 600 metatra (efa ho 2000 metatra) ny haavony. Nandrakotra ny fokonolona teo akaiky teo ny lavenona, na dia mbola manankery teo akaikin’ny vavahady aza ny didy fampielezam-peo taloha, ka tsy nisy ny aina nafoy.
Nilaza ny talen'ny Ivontoerana Fanafoanana ny Loza Volkanika sy Geolojika Yogyakarta, Hanik Humeda, fa ity no fivoahana lehibe indrindra avy amin'ny Tendrombohitra Merapi hatramin'ny nampiakatra ny haavon'ny loza tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa ny manam-pahefana.
Tombanana ho 1,8 tapitrisa metatra toratelo (66,9 tapitrisa metatra toratelo) ny dome atsimo andrefana ary 3 metatra eo ho eo ny haavony. Avy eo dia nirodana ny ampahany tamin'ny alatsinainy maraina, nipoaka ny pyroclastic mikoriana avy any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny tendrombohitra farafahakeliny indroa.
Nandritra ny antoandro, fara fahakeliny, zavatra kely pyroclastic roa hafa no nipoaka, nidina teo amin'ny 1,5 kilometatra teo ho eo nanaraka ny tehezan-tendrombohitra atsimoandrefana. Ity tendrombohitra mirefy 1 metatra (2.968 metatra) ity dia eo akaikin'i Yogyakarta, tanàna tranainy misy mponina an'hetsiny ao amin'ny faritra metropolitan'ny Nosy Java. Nandritra ny taonjato maro, io tanàna io dia ivon'ny kolontsaina Javaney sy toerana misy ny fianakavian'ny mpanjaka.
Nijanona ho eo amin'ny laharana faharoa amin'ny efatra ny sata famaizana an'i Merapi hatramin'ny nanombohan'ny fipoahana tamin'ny Novambra lasa teo, ary tsy nampiakatra izany ny Foibem-pahefan'ny Geolojika sy Volkano Indoneziana na dia nitombo aza ny asan'ny volkano nandritra ny herinandro lasa.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Tendrombohitra Merapi sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Tendrombohitra Merapi